စမတ် စက်တပ် linear actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > linear လျှပ်စစ် Actuator > စမတ် စက်တပ် linear actuator
စမတ် စက်တပ် linear actuator
AOX-QL စီးရီး စမတ် စက်တပ် lineတစ်ဦးr တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r ဖြစ် သငျ့လျြောသော ဘို့ ပြောင်းလဲပစ် နှင့် Open-နီးစပ် တာဝန် ၏ ထိန်းချုပ်မှု နှင့် ဖြစ်စဉ် နည်းပညာ သို့ ခှဲစိတျကုသ ထိန်းချုပ်မှု vတစ်ဦးlves.AOX ရှိပါတယ် ဖူး ကတိသစ္စာပြု သို့ အဆိုပါ ပုံစံ နှင့် ပြုလုပ် ၏ အလွန်ကောင်းမွန်သော AOX-QL စီးရီး စမတ် စက်တပ် lineတစ်ဦးr တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r နှင့် ထိန်းချုပ်မှု equipment.It ဖြစ် thဖြစ် အောင်မြင်သော positioning ကို နှင့် အားကြီးသော ကုန်ပစ္စည်း အရည်အသွေး အသိအမြင် ၏ အားလုံး ဖြစ်စဉ် ဝန်ထမ်းများ ထို ကြောင့် AOX တစ်ဦး ကုန်သွင်းသူ ၏ vတစ်ဦးlve တစ်ဦးuသို့mတစ်ဦးtion ဖြေရှင်းချက်။
မက်စ်လေဖြတ်ခြင်း: 100 မီလီမီတာ
လူပျိုအဆင့်: ဗို့အား (10% ±á); Hz (5% ± a)
3 အဆင့်: ဗို့အား (10% ±á); Hz (5% ± a)
60 Hz (208, 220, 230, 240, 380, 440, 460, 480, 575.600 Volts)
DC က: 24 V ကို (10% ± a)
remote control setting ကို
AOX-QL စီးရီးစမတ်မော်တော် linear actuator ၏ installation အရွယ်အစားအဆို့ရှင်၏ installation အရွယ်အစားကိုက်ညီမပါဘူးဆိုရင်, နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနှင့်တွေ့ဆုံ, ထို့နောက်အခြားအဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုပါ။
ထိန်းချုပ်ခြင်း circuit ကို Single-အဆင့်သို့မဟုတ်သုံးခု-အဆင့် power supply စံနှင့်တွေ့ဆုံ circuit ကို layout ကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်ခြင်းနှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဖြစ်ပါတယ်, ဆိပ်ကမ်းကိုထိရောက်စွာအပိုဆောင်းအလုပ်လုပ်တဲ့လိုအပ်ချက်များကိုအမျိုးမျိုးဖြည့်ဆည်း။
3. Intelligent module တစ်ခု
Hybrid ကိုအင်နာလော့တိုက်နယ်နှင့်အတူမြင့်မားတဲ့ပေါင်းစည်းမှုနှင့်အနိမ့်ပါဝါစားသုံးမှုနှင့် control panel ထဲကအတူ AOX-QL စီးရီးစမတ်မော်တော် linear actuator အသုံးပြုမှုတစ်ခုတည်းသင်္ဘောကွန်ပျူတာမော်တာအပူအရင်းအမြစ်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုဘုတ်အဖွဲ့အကောင်အထည်ဖော်မှုဖြစ်ပါတယ်နိုင်အောင်, အားလုံးသတ္တု plug-in ကိုတပ်ဆင်ခြင်း, မွေးစားဖြစ်ပါတယ် အလွန် software နှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲ၏ဆန့်ကျင်နှောင့်ယှက်သောစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့အပူချိန်ခုခံတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, ထိရောက်စွာအထီးကျန်။
4. Multi ထိန်းချုပ်မှု mode ကို
စီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့အဆို့ရှင်ဖွင့်လှစ်သို့မဟုတ်ပိတ်လိုက်သကဲ့သို့အဆုံးအသုံးပြုသူတစ်ဦးအကွာအဝေးကနေဖြန့်ဝေထိန်းချုပ်မှုစနစ် (DCS) သို့မဟုတ်သည် Programmable ယုတ္တိဗေဒ controller ကို (PLC) မှတဆင့်, နီးကပ်, ပွင့်လင်းပေးပို့ရပ်တန့်, ဒါမှမဟုတ်အချိုးကျထိန်းချုပ်မှုအချက်ပြနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအော်ပရေတာလည်းပွင့်လင်းသို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာ control panel ထဲကဒါမှမဟုတ် AOX-QL စီးရီးစမတ်မော်တော် linear actuator ရဲ့အမှားရှာခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှအဆင်ပြေဖြစ်သောအနီအောက်ရောင်ခြည်သုံးအဝေးထိန်းမှတဆင့်အဆို့ရှင်ကိုပိတ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။
Zhejiang Aoxiang Automation နည်းပညာ Co. , Ltd ကုမ္ပဏီ 16.200 စတုရန်းမီတာတစ်ဆောက်လုပ်ရေးဧရိယာနှင့်အတူ, 12.300 စတုရန်းမီတာဧရိယာဖုံးလွှမ်း 1997 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံဧရိယာ 12.600 စတုရန်းမီတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကသာ 20 ကီလိုမီတာကွာ Wenzhou လေဆိပ်နှင့် Wenzhou မီးရထားဘူတာကနေဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါယာဉ်အသွားအလာအဆင်ပြေပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီနီးပါး 23 နှစ်ကြာလျှပ်စစ် actuators တွေရဲ့ထုတ်လုပ်မှုကိုအထူးပြုနေတဲ့အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်း, ဒီဇိုင်း, သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး, ထုတ်လုပ်မှု, အရောင်း, ပြီးနောက်-အရောင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့် training.The နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုပေါင်းစပ်ထက်ပို 60000 ယူနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်ကျယ်ပြန့်သင်တို့သည်ငါတို့၏ AOX-QL စီးရီးစမတ်စက်တပ် linear actuator စိတ်ဝင်စားရေနံနှင့်ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း, ရေကုသမှု, သင်္ဘော, စက္ကူ, ပါဝါဘူတာ, အလင်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အခြား fields.If အတွက်အသုံးပြုကြသည်, E-mail ကို zjaox09 ဖြင့်ငါ့ကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်ပါ @ zjaox.com ။
အဆိုပါ AOX-QL စီးရီးစမတ်မော်တော် linear actuator ၏လည်ပတ်မှုအခြေအနေများအထူးသဖြင့်ကမ်းခြေနဲ့ပင်လယ်ပလက်ဖောင်းပတ်ဝန်းကျင်အတွက်, ရှုပ်ထွေးပြီးမတူညီဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထိုချေးအလွန်ခိုင်မာတယ်။ ချေးတားဆီးနှင့် actuator ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုဘဝကိုမြှင့်တင်ရန်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ် actuators ပြည်, ကမ်းခြေနှင့်ပင်လယ်ပေါ်မှာရှိပါတယ်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ရေစိုခံစွမ်းဆောင်ရည်၏အသွင်အပြင်အဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါပရော်ဖက်ရှင်နယ်စမ်းသပ်ကိရိယာများဝယ်ယူနေသည်နှင့် actuator တင်းကြပ်စွာစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
မေး: AOX-QL စီးရီးစမတ်မော်တော် linear actuator ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
မေး: သင် AOX-QL စီးရီးစမတ်မော်တော် linear actuator ဘို့မဆိုလျှော့စျေးပေးပါသလား
မေး: AOX-QL စီးရီးစမတ်မော်တော် linear actuator မှာဘယ်လိုနေသလဲ?
hot Tags:: စမတ် စက်တပ် linear actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်